Xujey kabadan 2 malyan muslimiina ah oo maanta taagan Banka Carafo
Safaf dhaadheer oo Gawaari ah ayaa is qabsaday wadada isku xirta magaalooyinka Maka Al-mukarama iyo Mina, iyadoo ciidamada booliskana ay baarayaan sharciyada dadka ay sitaan iyo gaadiidka ay lasocdaanba.
Tani waa bilaawgii waqtiga Xajka, amaanka aad ayaa loo adkeeyay waxaana jira bara koontarool, dalka Sacuudiga ayaa qaabilaya kumanaan dad ah oo sanadkaan xajinaya.
Xajka ayaa sanadkaan kusoo beegmay waqti marxalad aad u adag uu gobolka Bariga dhexe wajahayo, waxaana dadbadai ay kawalbahaarsanyihiin in Colaada Siitiya iyo harsi la’aanta kale ee kajirta wadamada carabta ay saameeyn ku yeelato Xajka.
Doowlada Sacuudiga ayaa xujeeyda uxaqijisay in ciidamo amaanka suga lageeyay meel walbo oo kamid ah goobaha loo tagayo gudashada arkaanta xajka.
Xajka oo sanadkiiba ay kaqayb galayaan dad kabadan 2 milyan oo ruux, ayaa xujeeyda maanta waxay tagayaan oogada sare ee buurta Carafo, maalinka waa maalinka ay xujeeyda oo dhan ay ku kulmayaan buurta barakeeysan ee Carafo waxayna joogayaan ilaa gabaldhaca iyagoona ALLE baryi doona waydiisanayana danbi dhaaf.
Xajka waxa uu kamid yahay 5-ta tiir ee islaamka waxaana laga rabaa qof walboo muslim ah awoodana inuu tago halmar